मडारिन थाल्यो आकाशमा खतरनाक बादल, यस्तो छ कारण, बादलबारे बुझिराखौं ! « Surya Khabar
काठमाडौ । हरेक दिन बिहान आकाशतिर हेर्दा बादल ढपक्कै देखिन थालेको पनि झन्डे साता भयो । मौसम बदलिएको र दिन धुम्मिएको प्रस्ट पार्ने बादललाई भने सबैले चिनेका हुँदैनन् ।
तपाईलाई थाहा छ ? कति थरी हुन्छन् आकाशमा बादल ? अनि कुन बादल कस्तो प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ ? मौसमविद्का अनुसार आकाशमा तीन तहका दश थरी बादल हुन्छन् । शुक्रबारको नागरिकमा लेखिएको छ, कुनै बादल मानवका लागि एकदमै जोखिमयुक्त त कुनै कम जोखिमयुक्त हुन्छन् ।
यही चर्चासँगै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि आम नागरिकलाई बादलबारे बुझाउने प्रयास गर्यो। दिवस समापन कार्यक्रममा बिहीबार बादलबारे आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका युवा अनुसन्धानकर्ता सुमनकुमार भट्टराईले भने, बादल धेरै किसिमका छन् । बादल लाग्ने कारण पनि फरक–फरक छन र चरित्र पनि । यतिमात्र होइन बायुमण्डलको तहअनुसार बादल देखिन्छ ।